EXCEL ကိုအတွက်စာမကျြနှာကိုရေတွက်ဖို့ကိုဘယ်လို - EXCEL ကို - 2019
Microsoft က Excel ကိုစာမျက်နှာနံပါတ်
မှတ်သားသိနိုင်ဓာတ်ပုံများကို - လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူများကအကြားအလွန်ရေပန်းစားအလေ့အကျင့်။ Van Gogh ရဲ့ style အတွက်ပန်းချီ, ရေနံပန်းချီသို့မဟုတ်ပုံတူသို့သာမန်ရုပ်ပုံအသွင်ပြောင်းဖို့လှည့်ကွက်တစ်ခုကြီးမားသောအရေအတွက်အားရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မူကွဲတွေအများကြီး။
တစ်ဦးကအလွန်ဘုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်း - ဓာတ်ပုံတွေထဲကနေခဲတံရေးဆွဲများ၏ဖန်တီးမှု။ တကယ့်အနုပညာလက်ရာ၏ရုပ်ပုံစေတစ်ချိန်တည်းမှာ, က Photoshop ကိုကဲ့သို့သောဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာအတွက်သူ့ကိုနှင့်အတူလိမ္မာကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ထိုသို့သောအသွင်ပြောင်း browser ကိုတိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည် - အနည်းငယ် mouse ကိုကလစ်အတူ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Photoshop မှာဓာတ်ပုံကနေပုံတစ်ပုံကိုအောင်လုပ်နည်း
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူတစ်ဦးဆွဲသို့မဆိုဓါတ်ပုံကိုဖွင့်ဖို့အများကြီးကို web အရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်။ တချို့န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ, သင်စနစ်တကျ image ကို stylize နိုငျသညျ, အခြားသူများကို tools များကိုလည်းပုံသို့မဟုတ် frame ရဲ့ဘေးထွက်အတွက်ပုံချပြီးအားဖြင့် collage လုပ်ဆောင်။ ကျနော်တို့သင့်လျော်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုနှစျယောကျ၏စံနမူနာအပေါ်ဓာတ်ပုံကနေခဲတံပုံဆွဲကိုဖန်တီးရန်နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများမှာကြည့်ပါ။
Method ကို 1: Pho.to
ဤသည်ပေါ်တယ် browser ကိုပြတင်းပေါက်တိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်ပုံရိပ်အတွက် function တစ်ခုကျယ်ပြန့်အစုံပါရှိသည်။ သီးခြား option ကိုအပိုင်းမီးမောင်းထိုးပြနေသည် "ဓာတ်ပုံအကျိုးသက်ရောက်မှု"သငျသညျဓာတ်ပုံများမှအလိုအလျှောက်ပုံစံလျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုခြင်း။ ဆိုးကျိုးများအနေနဲ့အထင်ကြီးအရေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကိုယ်စားပြုသည့်အမျိုးအစားသို့ခွဲခြားထားတယ်။ အဆိုပါစတိုင်ငါတို့သည်ခန့်မှန်းရန်အဖြစ်လွယ်ကူသောလိုအပျကွောငျး, အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည် "အနုပညာ".
Pho.to အတွက်ရွေးချယ်မှုခဲတံပုံဆွဲ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ လိုချင်သောစတိုင်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့် preview ကို click လုပ်ပါ။
ထိုအခါမရရှိနိုင် options များထဲကတစ်ခုနှင့်အတူဓါတ်ပုံများတင်သွင်း - ကွန်ပျူတာကိုလင့်ခ်သို့မဟုတ် Facebook အကောင့်ကနေ။
ဒေါင်းလုဒ်ရဲ့အဆုံးမှာအလိုအလြောကျ image processing တွင်နှင့်စာမျက်နှာအချောပုံဆွဲနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်ပုံကိုတည်းဖြတ်ရန်အနိမ့်ဆုံးဤနိုင်ပါတယ်, အဲဒီနောက်ရလဒ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်, ခလုတ်ကိုနှိပ် "Save နှင့်မျှဝေပါ".
ကွန်ပျူတာမှတ်ဉာဏ်မှဓာတ်ပုံ upload တင်ပေးရန်, ့လက်မှတ်နှင့်အတူ icon ကို click "ဒေါင်းလုပ်".
အရည်အသွေးအ JPG-ရုပ်ပုံ, သင်၏စတိုင်ကိုဖန်ဆင်း - ထိုဝန်ဆောင်မှု၏ရလဒ်။ သယံဇာတ၏အကျိုးကျေးဇူးများတစ်ခုမှာဆိုးကျိုးများမှာများစွာသောအမျိုးမျိုးဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်သည်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပင်အမှု၌တည်ရှိပါကတစ်ဦးယူနီဖောင်းဦးတည်ချက်, ယ့်ပုံပဲ - တစ်ဦးခဲတံပုံဆွဲ။
Method ကို 2: PhotoFunia
အဆိုပါလူကြိုက်များအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုအလိုအလျောက်တိကျတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၏အတုကိုအသုံးပြုပြီးတယောက်ကိုတယောက် image ကိုထည့်ရန်။ ကိန်းဂဏန်းများအရာဝတ္ထု၏ဘေးထွက်ပေါ်တွင်သင်၏ဓါတ်ပုံကိုထားရဆုံးအရာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, တစ်ပြင်လုံးကိုအမျိုးအစားခွဲဝေနေကြသည်။ ဒီမတူကွဲပြားမှုများထဲတွင်အဲဒီမှာတော်တော်များများ options များဖြစ်ကြပြီးပန်းချီကားခဲတံဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ပုံသို့သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဖွင့်ရန်, အပေါ်က link ကို click နှိပ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု၏တဦးတည်းကိုရွေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, "ခဲတံပုံဆွဲ" - ပုံတူရိုက်ချက်များများအတွက်ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းနည်း။
ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ Boot တက် image ကိုသှားဖို့, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဓာတ်ပုံကို Select လုပ်ပါ".
pop-up window ထဲမှာ, ခလုတ်ကိုကိုသုံးပါ "ကို PC ကနေ Upload လုပ်ပါ"Windows Explorer ကိုမှတိုက်ရိုက်ဓာတ်ပုံများတင်သွင်းဖို့။
တစ်ဦးဆွဲ၏နောက်ထပ်အတုအဘို့ပုံရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောအဧရိယာကိုမီးမောင်းထိုးပြ, ကိုနှိပ်ပါ "သီးနှံ".
ထိုအခါနောက်ဆုံးပုံရိပ်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုသတ်မှတ် - အရောင်သို့မဟုတ်အလွှာဟာရွေးချယ်စရာအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အဖြစ်ကို select လုပ်ပါတ - textured ရောင်စုံသို့မဟုတ်ဖြူ၏။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် deselect «အရောင်မှိန်အနား»နယ်စပ်နွမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားရန်။ ထိုအခါ button ကို click "Create".
အဆိုပါရလဒ်လာမယ့်တာရှည်မရဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အချော image ကိုကယ်ဖို့, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒေါင်းလုပ်" ဖွင့်လှစ်သောစာမျက်နှာ၏အပေါ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာ။
Service ကိုသင်တစ်ဦးထင်ရသောငျြးဓါတ်ပုံများ၏အမှန်တကယ်အထင်ကြီးရုပ်ပုံကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ developer များဆိုသည့်အတိုင်း, တစ်ဦးအရင်းအမြစ်နေ့စဉ်နှစ်ယောက်ထက်ပိုသန်းပုံရိပ်တွေ process လုပ်တယ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဝန်ပြတ်တောက်သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ပင်နှင့်အတူ။
နိဂုံးချုပ်မှာ, ဆောင်းပါးဝန်ဆောင်မှုမှာဆှေးနှေးနှစ်ခုခဲတံပုံဆွဲသို့ရိုးရှင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဓာတ်ပုံများများအတွက်စံပြဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည်, တစ်ဦးဖန်တီးမှု collage ဖန်တီးရန်။ ထိုအ Pho.to, သင်နှင့် PhotoFunia စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းခွင့်ပြုပါနှင့်အနည်းငယ် mouse ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ desktop ကိုအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးယူမယ်လို့ဘာလုပ်ဖို့နှိပ်လိုက်ရင်ရှိရာ။
ဗီဒီယို Watch: Top 15 Advanced Excel 2016 Tips and Tricks (စက်တင်ဘာလ 2019).